Soomaaliya oo beddeleysa danjireyaasha u fadhiya 8 dal – Kalfadhi
November 15, 2017 November 15, 2017 Kalfadhi
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar ayaa shalay oo Talaado ahayd sheegay inay qorsheynayaan beddelidda siddeed safiir oo dhowaan ay dib ugu yeereen. Waxaa xigi doona safiirro iyo xilal safaaradeed oo isbeddelo ay ku sameyn doonaan, taas oo qeyb ka ah dhaqangelinta sharciga arrimaha dibadda Soomaaliya oo goleyaasha dowladda ay ansixiyeen sanadkii 2014.
Wasiirka oo ka hor hadlayay Aqalka Sare oo su’aal oraaheed ugu yeeray ayaa in muddo xileedyadii ka horreeyay aan lagu dhaqmi jirin sharcigaas oo golaha wasiirrada iyo baarlamaanka ay horay u ansixiyeen madaxweynahana uu u saxiixay.
Sharciga wuxuu dhigayaa in danjiraha uusan joogi karin muddo ka badan afar sano safaaradda loo magacaabay oo ay khasab tahay in la beddelo iyo diblumaasi kasta in uusan waddanka ma maqnaan karin wax ka badan siddeed sano.
Waxaa sharci ah danjiraha la magacaabayo inuu yahay qof wasaaradda ka soo shaqeeyay muddo labo sano ah, laakiin dhaqangelinta arrintaas ay adkeynayso maaddaama aysan wasaaradda joogin afartan qof oo safaaradaha kala duwan qaban kara.
Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha socdaalka, hab-maamuuska, maxaabiista Soomaalida ee ku xiran dalalka kale, qiimo u yeelidda baasaboorka iyo xiriirka dalalka deriska.
Aan beddelno dhaqanka ah hala dhinto, oo ha laga socdo!